पुरा भयो ओलीले देखेको सपना! हावाबाट निकालिएको बिजुली उद्घाटन गरेर सरकारलाई बुझाउदै ओली मुस्ताङको कोरलामा « Light Nepal
पुरा भयो ओलीले देखेको सपना! हावाबाट निकालिएको बिजुली उद्घाटन गरेर सरकारलाई बुझाउदै ओली मुस्ताङको कोरलामा
मुस्ताङ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने आफ्नो सपना पुरा भएको बताउनु भएको छ । मुस्ताङको जोमसोममा हावाबाट उत्पादन भएको बिजुलीको आज उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मुस्ताङ मात्रै नभएर नबलपरासी र हेटौंडामा पनि हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
आफ्नो योजनालाई हावामा उडाउनेलाई मुस्ताङमा हावाबाट बिजुली उत्पादन भएको हेर्न ओलीको अनुरोध थियो । बुद्ध पावर प्रा.लिको पहलमा गत बर्षको बैशाखदेखि शुरु गरिएको निर्माण कार्य १६ महिना पछि सम्पन्न भएको प्रा.लिका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पराज तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो ।